Tanzanite tamin'ny vato nahaterahana Desambra, turquoise - Vaovao farany 2021
Tanzanite, robina ary zircon dia ireo vato ho an'ny Desambra araka ny lisitra taloha sy maoderina an'ny Dec birthstone. Ny vatosoa tonga lafatra ho an'ny peratra fanombohana kavina amin'ny volana Desambra na firavaka rojo. Blue topaz indraindray koa dia tononina toy ny loko manga vato fahaterahana desambra.
Inona no dikan'ny vato nahaterahana Desambra?
Ny vato teraka dia vatosoa izay mifandray amin'ny volana nahaterahana Desambra: Tanzanite, robina ary zircon. Ny vatosoa tonga lafatra ho an'ny volana Desambra dia peratra na rojo mavo
Inona no loko niavian'ny Desambra?
Aiza no ahitana ny vato Desambra?
Inona no firavaka volana Desambra?
Aiza no hahitana ny vato nahaterahana tamin'ny Desambra?
Inona avy ireo famantarana ny zodiaka amin'ny vato nahaterahana Dec?
Manomboka amin'ny Desambra ny harena tsara
Ny loko manga sy volomparasy isan-karazany amin'ny zoisite mineraly dia Tanzanite .Manaraka ny vondrona mineraly epidote. Ao amin'ny Tanzania, amin'ny faritra fitrandrahana kely dia kely.
robina dia mineraly mangidihidy, manga ka hatramin'ny maitso, izay phostatate vita amin'ny varahina sy alimo. Izy io dia tsy fahita firy ary sarobidy amin'ny naoty tsara kokoa ary nohajaina toy ny vatosoa sy vato haingo nandritra ny an'arivony taona maro noho ny volony manokana.
Raisina ho toy ny ody fitiavana. Izy io dia tandindon'ny harena sy fahombiazana ary inoana fa hampiala ny saina sy hiarovana ny mitondra azy amin'ny ratsy. Ny peratra turquoise, indrindra, dia heverina fa manalavitra ireo fanahy ratsy.
Zircon dia mineraly ao amin'ny vondrona nesosilicates. Ny anarany simika dia zirconium silicate. Zircon dia miendrika silicate mitsonika miaraka amin'ny ampahany betsaka amin'ny tanjaka avo lenta izay singa tsy mifanaraka.
Tanzanite dia malaza amin'ny trichroisme tena matanjaka, miseho mifandimby manga, volomparasy ary burgundy arakaraka ny firosoan'ny kristaly. Tanzanite Mety hiseho amin'ny fomba hafa ihany koa rehefa jerena amin'ny toe-jiro samihafa.
robina, ny volana desambra, loko manga, teraka hatramin'ny fotsy ka hatramin'ny vovo-tany ka hatramin'ny lokon'ny manga, ary amin'ny maitso manga ka hatramin'ny maitso mavo. Ny manga dia avy amin'ny varahina idiochromatic raha ny maitso kosa dia mety ho vokatry ny fahalotoan'ny vy.
Zircon dia miseho amin'ny loko maro, ao anatin'izany ny volontany mena, mavo, maitso, manga, volondavenona ary tsy misy loko. Indraindray ny lokon'ny zircons dia azo ovaina amin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana. Zircon manga ihany no Dec birthstone. Ny loko manga maivana no tena fahita, manga mainty izay mahalana.
Ilay hany fantatra tanzanite Ny fametrahana vola manan-danja ara-barotra dia any avaratr'i Tanzania.
Ny loharanon-kevitra fototra robina dia Iran sy Etazonia. Ny loharanom-baovao hafa dia i Sina, Bulgaria, Tibet, Afghanistan, Australia, India, Chile ary Turkestan.
Blue zircon dia avy any Kambodza.
Ny firavaka maoderina teraka dia vita amin'ny tanzanite, robina ary zircon. Ny vato miloko manga dia mifanentana tanteraka amin'ny diamondra fotsy kely na vatosoa tsy misy loko. Izahay dia mivarotra peratra lokanga, fehin-tànana, kavina, rojo ary maro hafa amin'ny Desambra.
Misy tsara tanzanite, robina ary zircon amidy ao amin'ny fivarotanay.
TanzaniteNy alokaloka lalina indrindra, Indigo, dia manambatra ny fahatsapana ny taratra volomparasy amin'ny fitokisan'ny tara-pahazavana madio. Mitondra fahendrena, fahamarinana, fahamendrehana ary fifehezana ara-panahy izany. Vato fitsarana sy lava fiainana, mampiroborobo ny fandinihana lalina ary mety hiteraka fahendrena lalina rehefa ampiasaina tsara.
robina, dec birthstone, dia efa tandindon'ny harena sy ny fihoaram-pefy amin'ny kolotsaina taloha, fa ny fahalianana amin'ity vatosoa manaitra ity dia tsy mbola matanjaka noho ny ankehitriny. Na aiza na aiza no ahitana azy, robina dia mifandray foana amin'ny toetra matanjaka sy tsara toy ny fahadiovana sy ny fanasitranana.
Ny zirona manga dia voalaza fa manadio angovo maizina. Izy io dia nampiasaina ho talisman amin'ny dia lavitra na ho fiarovana amin'ny ratsy amin'ny andro taloha. Rehefa mahatsapa ho voafandrika amin'ny angovo ratsy ianao dia lazaina fa ny zirona manga dia manadio ny herinao. Mitondra fanambinana sy voninahitra ho anao koa izany.
Ny vato Sagittarius sy Capricorn dia vato roa volana desambra.
Na inona na inona ianao Sagittarius sy Capricorn. Tanzanite, robina ary zircon no vato manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 31 Desambra.
Zodiaka sinoa: manomboka amin'ny volana Desambra ny harena tsara, mitombo ny vola.
Ho an'ireo izay an'ny tigra, amin'ny volana Desambra, hiaraka ny vintana, ny harena lehibe ary ny vintana kely. Rehefa mihodina ny harena be dia hiroso ny harena, ary ho toy ny nofy ny fiainana
Desambra 1 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 2 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 3 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 4 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 5 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 6 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 7 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 8 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 9 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 10 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 11 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 12 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 13 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 14 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 15 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 16 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 17 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 18 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 19 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 20 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 21 Sagittarius Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 22 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 23 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 24 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 25 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 26 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 27 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 28 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 29 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 30 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Desambra 31 Capricorn Tanzanite, robina ary zircon
Vato fahaterahana Desambra voajanahary amidy ao amin'ny fivarotana vatosinay